About Us - Changzhou Lingdian Izinkuni Co., Ltd
Changzhou Lingdian Izinkuni inkampani yasungulwa ngo 2003. yethu isitshalo ndawo 80,000 square metres. Singabantu ibhizinisi phambili emkhakheni vinyl flooring, wpc vinyl flooring and SPC flooring e China.
Ukuze vinyl flooring, umthamo yethu iziqukathi ezingaphezu kuka-150 njalo ngenyanga; Ukuze wpc vinyl flooring. Umthamo wethu iziqukathi ezingaphezu kuka-150 njalo ngenyanga; Ukuze flooring SPC, umthamo wethu iziqukathi ezingaphezu kuka-50 nyanga zonke.
Inkampani yethu alread wadlula ISO9001 ukuphathwa izinga uhlelo isitifiketi, ISO14001 ukuphathwa kwemvelo isitifiketi uhlelo kanye CE isitifiketi kusuka TUV inkampani yokuhlola. Sathola ilayisensi patent ka Unilin kokubili flooring laminate futhi vinyl flooring. Umshini Good ukukhiqiza, ukuhlolwa umshini ezinhle futhi izinga esiqinile ukulawula ugcine imikhiqizo yethu izinga okusezingeni eliphezulu ezingeni.
Abangane Siyakwamukela emhlabeni wonke ukuvakashela inkampani yethu ngokubambisana olwengeziwe.